बिहे गरिरहेका बेहुलालाई रामधुलाइ कुटेर सामाजिक संजालमा हिरो बने यी फोटोग्राफर , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बिहे गरिरहेका बेहुलालाई रामधुलाइ कुटेर सामाजिक संजालमा हिरो बने यी फोटोग्राफर
एजेन्सी। टर्मीमा एक फोटोग्राफरले बिहे गरिरहेका बेहुलालाई रामधुलाइ कुटेका छन् । ती फोटोग्राफरलाई त्यही बिहेको फोटो खिच्न बोलाइएको थियो । ती बेहुलाले १५ वर्षकी किशोरीसँग बिहे गर्दै थिए । बेहुलाले बालविवाह गर्न लागेको देखेपछि ती फोटोग्राफर ओनुर अल्बायराकले बेहुलालाई नै कुटिदिए ।
सामाजिक संजालमा ओनुरलाई हिरोको दर्जा दिइएको छ । ओनुर टर्कीको मलाट्या प्रान्तका हुन् । केही दिनअघि ओनुरलाई बिहेको फोटोग्राफीको लागि बोलाइएको थियो । ओनुर बिहेमा पुगेपछि देखे कि बेहुला बयस्क थिए तर बेहुली मात्रै १५ वर्षकी किशोरी थिइन् । बिहेका बेला ती बेहुली निकै डराइरहेकी थिइन् । यो देखेर ओनुरले फोटो खिच्न अस्वीकार गरे र बिहे रोक्न भने । उनले बिहे रोक्न भनेपछि बेहुलासँग उनको बहस सुरु भयो । बहस बढेपछि बेहुलाले ओनुरमाथि हात उठाए ओनुरले पनि बेहुलाको नाक नै भाँचिदिए ।
यो घटना सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएपछि ओनुरको सर्वत्र तारिफ भइरहेको छ । ओनुरका अनुसार बेहुला आफ्नो बिहेको विषयमा कुरा गर्न २ हप्ता अगाडि उनीकहाँ आएका थिए । त्यतिबेला बेहुलीको उमेरका विषयमा कुरा भएको थिएन । फोटोगफरले भने कि उनलाई बेहुलाको नाक भाँचिदिएकोमा कुनै पछुतो छैन । टर्कीमा बालविवाहको समस्या बढिरहेको छ । यहाँ कानुनअनुसार बिहेको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष हो तर कानुन तोड्दै वालविवाह भइरहेका छन् । ओनुरको घटना सार्वजनिक भएपछि टर्कीका १०० भन्दा धेरै फोटोग्राफरहरुले बालविवाहको फोटो नखिच्ने प्रण गरेका छन् ।